ဂျပန်နိုင်ငံကအစပြုခဲ့တဲ့ Capsule Hotel ကမ္ဘာတစ်၀ှမ်းလုံးမှာ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာ!!! - JAPO Japanese News
လာ 03 Feb 2020, 14:01 ညနေ
လုံး၀ ကြက်တွေကိုမွေးပြီးနေရာချထားတဲ့ စင်တွေလိုမျိုး တစ်ယောက်စာအခန်းကျဥ်းကျဥ်းလေးမှာ တည်းခိုနိုင်မှာကတော့ capsule hotel ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်က capsule hotel ဆိုတာ ဂျပန်နိုင်ငံကနေအစပြုခဲ့တာပါ။
ဒီလိုမျိုးထူးဆန်းပြီး ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်ကမ္ဘာတစ်ခုလိုခံစားရစေမယ် ဟိုတယ်မှာ ၁ ညလောက် တည်းခိုကြည့်ချင်လာ?
စာဖတ်သူတို့ ဒီလိုဟိုတယ်ကို အင်တာနက်၊ လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ တွေ့ဖူးလာ?
တစ်ချို့ သူတွေတော့ သိနေပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက် ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်နော်…
အခန်းလို့ခေါ်ရမှာထက် box လို့ခေါ်ရင်တောင်ပိုပြီးတော့မှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လုံး၀ကိုကျောတစ်ခင်းစာလေးပါ။ ကျောတစ်ခင်းစာနေရာလေးတွေ တန်းစီထားတဲ့ ဟိုတယ်ပေါ့။
တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကို အခန်းပုံစံလေးကန့်ထားပြီး၊ ၀င်ရမယ့်အပေါက်ကိုတော့ လိုက်ကာ ဒါမှမဟုတ် တံခါးလေးတွေနဲ့ ပိတ်ဖို့ ထားပေးထားပါတယ်။
ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ အိပ်နိုင်ပါ့မလား? လို့ မအိပ်ဘူးသူတွေ တွေးကောင်းတွေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အပြင်ကနေကြည့်ရတာ အသက်ရှူများကြပ်သွားမလားပေါ့။
ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဟိုတယ်မှာတည်းဖူးပါတယ်။ အစပိုင်းကဆို ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် “ကြက်များဖြစ်သွားပြီလား” လို့ခံစားမိတဲ့ အခိုက်အတန့် (ရယ်လျက်)
ဒါပေမဲ့လည်း အထဲ၀င်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ၊ လုံးဝ အင့်အားသင့်စရာပါပဲ။ အထဲမှာ တော်တော်ကြီးကို သက်သောင့်သက်သာရှိတာပါ။
အခန်းကျဥ်လေးပေါ့နော်။ အဲ့ဒီအထဲမှာ အပူချိန်ကိုညှိနိုင်တဲ့ system လည်းပါသလို၊ လျှပ်စစ်မီးတွေလည်း တပ်ဆင်ပေးထားတယ်။ အထဲမှာသီးသန့်ကမ္ဘာလိုမျိုး တီဗွီလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ပြောရရင်တော့ ပုံမှန်ဟိုတယ်တွေထက် စျေးတော်တော်ကြီးကိုသက်သာတာက သူရဲ့အားသာချက်ပါ။
ရေချိုးကန်တို့ Toilet တို့ကတော့ အများနဲ့ share ပြီးသုံးရပေမယ့်၊ ညအိပ်ဖို့တစ်ခုအတွက်ပဲဆိုရင် တော်တော်လေးကို လုံလောက်နေပါပြီ။
ဒီ Capsule Hotel ကဂျပန်နိုင်ငံကနေ စပြီးထွင်ခဲ့တဲ့ ဟိုတယ်စတိုင်မျိုးဖြစ်ပေမဲ့၊ အခုနောက်ပိုင်းကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ပျံ့နှံ့သွားပြီး ကိုယ်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ facilities တွေ၊ design တွေထပ်ပြီး ပြင်ဆင်ကြတယ်ပေါ့။
ကမ္ဘာမှာ အသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့ ဒီ Capsule Hotel ကို နိုင်ငံအသီးသီးက ဘယ်လိုဆောက်ပြီး၊ ဘယ်လို facilities တွေထည့်ထားလဲ ကြည့်ရအောင်!!!!
London မြို့ရဲ့ Heathrow airport မှာရှိတဲ့ Yotel ဆိုတဲ့ ဟိုတယ်က Capsule Hotel အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်ခန်းထဲမှာ အလျင်မြန်ဆုံး WiFi ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပြီးတော့၊ black coffee ကိုလည်း စိတ်ကြိုက်သောက်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မှာလိုက်တာနဲ့ အိပ်ခန်းအရောက် အစားအသောက်၀န်ဆောင်ပေးမှုစနစ်လည်း ရှိတယ်နော်။
Skin care တွေလည်းထားပေးလို့ လုံးကို ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ပြောရမှာပဲ။
အိပ်ခန်းရဲ့ အကျယ်အဝန်းကတော့ လေယာဥ်ရဲ့ first class အကျယ်အဝန်းနဲ့ အတူတူလောက်ပါပဲ။ ဂျပန်နိုင်ငံက Capsule Hotel ထက်တော့ ကျယ်တယ်လို့ပြောရမယ်။
ခေါက်လို့ရတဲ့ စားပွဲလေးလဲပါတာမို့လို့ လုပ်ငန်းသမားတွေအတွက် ပိုပြီးတော့တောင်အဆင်ပြေတာပေါ့။
အတော်အသင့် ကျယ်တဲ့အခန်းလေးမှာ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာပါ တွဲပါတယ်။
ဒါကို Capsule Hotel လို့ခေါ်ဖို့အတွက်ကျတော့ နည်းနည်းတော့ခက်မယ်…
နယ်သာလန်နိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် Amstedam မှာရှိတဲ့ Capsule Hotel ကတော့ မသိတဲ့လူအတွက် အနာဂတ်ကိုရောက်သွားသလားလို့တောင် ဖမ်းစားထားပါတယ်။
Check in ၀င်တာနဲ့ လက်ကောက်ဝတ် လက်ပတ်လေးကိုပေးပြီး၊ အဲ့ဒီလက်ပတ်လေးက ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်ခန်းကိုသွားနိုင်မယ့် သော့လိုမျိုးပါပဲ။ နောက်ပြီး အိပ်ခန်းတွေထဲမှာ အစားအသောက်မှာလို့ရတဲ့ စနစ်တွေလည်းပါတာမို့လို့ မိမိရဲ့ အိပ်ခန်းကနေ သောက်စရာတစ်ခုခုမှာမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီလက်ပတ်လေးမှာရှိတဲ့ အခန်းနံပါတ်နဲ့တိုက်ပြီး လာပို့ပေးတယ်။
အိပ်ခန်းရဲ့ အကျယ်ကလည်း အတော်ပါပဲ။
အပေါ်ဖက်က လင်းနေတဲ့အရောင်ကိုလည်း ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရောင် ပြောင်းနိုင်ပါတယ်တဲ့။
ဒါကတော့ မူလပထမ Capsule Hotel အစစ်ပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်း ပုံစံအသစ်တွေ ထပ်ဖန်တီးနေပါတယ်။
ကြက်တွေထားတဲ့ စင်လေးနဲ့တောင်တူလိုက်တာ (ရယ်လျက်)….
Science fiction ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ထဲက အာကာသယာဥ်အပေါ်မှာလည်း ဒီလိုပုံစံလေးတွေပဲလားမသိဘူးနော်..
အခုနပြောခဲ့တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ capsule hotel ရဲ့ အိပ်ယာတွေက အာကာသယာဥ်ပေါ်က ပုံမုန်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အိပ်ယာဆိုရင် ဒီတစ်ခုကတော့ အာကာသစခန်းက ဆရာကြီးတွေရဲ့ အိပ်ယာပဲ ဖြစ်ရမယ်။
Science fiction ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကိုပြန်မြင်ယောင်လာသလိုလိုပဲနော် သူရဲ့ ဒီဇိုင်းကတော့……
အပူချိန်ညှိတာရော၊ အလင်းအမှောင်းနဲ့ တီဗွီ အသံတို့ အားလုံးဟာ Touch system ပါပဲ။
သူလည်းမသိရင် အနာဂတ်မှာဖြစ်လာတော့မယ် သိပ္ပံလောကကြီးလိုပဲနော်။
အာကာသယာဥ်ကြီး (အဲ့.မှားလို့) ဒီပြင်ဆင်ထားတဲ့ အခန်းအတွင်းမှာတော့ bar, café နဲ့ laundry service တွေလည်း ပါပြီးသားတဲ့။
အာကာသခရီးထွက်နေတဲ့ အိပ်မက်မျိုးတောင် ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုဘဲ အခမဲ့မက်ခွင့်ရှိလိမ့်မယ်နော်။
ကမ္ဘာတစ်၀ှမ်းမှာ ဒီလို capsule hotel တွေက ကိုယ်ပိုင်စတိုင်နဲ့ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။
အကယ်၍စာဖတ်သူတို့က တစ်နေရာရာကို အလည်အပတ်သွားမယ်ဆိုပါစို့၊ ဟိုတယ်မှာတစ်နေကုန်နေမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ညအိပ်တည်းခိုဖို့ပဲဆိုရင်တော့ ဒီလို capsule hotel
နေရာအနည်းငယ် ကျဥ်းတာလေးတစ်ခုတည်းရှိပေမဲ့၊ လိုအပ်တဲ့ facilities တွေကိုထားပေးထားတယ် ပြီးတော့ အိပ်ချင်စဖွယ်ကောင်းအောင် သန့်သန့်ရှင်းရှင်း လှလှပပထားပေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေထဲက အကောင်းဆုံးကလည်း စျေးသက်သာတာပါပဲ။
တကယ်လို့ခရီးတွေထွက်ဖြစ်မယ်ဆို ဒီလို capsule hotel တွေမှာ တည်းဖူးလေ့ရှိအောင် တည်းကြည့်အုံးနော်!!!
စာရေးသူကတော့ ပထမဆုံးတည်းတဲ့အချိန်တုန်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ့် ကြက်ကလေးများလားလို့တောင် ထင်မိခဲ့တာပါ !!! (ရယ်လျက်)
အမှတ်တရလေးတွေ ဖန်တီးပေးမယ့် ရေခဲပြင်ဟိုတယ်
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အေးချမ်းလှတဲ့ဆောင်းရာသီမှာ ဒီလိုရထားလေးမစီးချင်ကြဘူးလား ?
လေဆိပ်နဲ့နီးပြီး ရှုခင်းလှပလွန်းပေမယ့် ဘယ်သူမှမသုံးကြတဲ့ဘူတာ